भारतलाई लाइनमा ल्याउने धेरै तरिका छन् - Aarthiknews
भारतलाई लाइनमा ल्याउने धेरै तरिका छन्
तराई डुबानको समस्या
शनिबार, २८ असार २०७६
यो साल पनि बाढीले ठुलो क्षति गरिसक्यो। हामी वर्षौदेखि भारतीय बाँधको कारण नेपाली गाउँ डुबानमा परेको सुन्दै आएका छौं । यो के यथार्थ हो ? अनि यसको समाधान छैन ?
भारतले नेपालको सीमा भर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बाटोको नाममा बाँध बनाएको छ। भन्नलाई बाटो तर यथार्थमा त्यो बाँध नै हो। चार मिटर अग्लो बाटो नत्र कसैले बनाउँछ ।
तर, भारतले त बाटै हो भन्छ नि ?
कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, म प्रमाण नै दिन्छु । गएर हेर्नुस, त्यहाँ खोला भएको ठाउँमा पुल छ । त्यो त स्वाभाविकै भयो । पुलमा ढोका छन् । ढोका भएको पुल हो वा बाँध ? स्पष्ट छ, त्यो बाँध नै हो । त्यो बाटो पुरा तटबन्ध र बाँध हो । यो हामीलाई डुबाउन नै बनाएको हो ।
अब भारतको यो रबैयाको नेपालले जवाफ चाहिं कसरि दिने ?
अरुकुरा रोकिदिने नि । लाईनमा आईहाल्छन ।
अरुकुरा भन्नाले ?
कोशी हाइ ड्याम्म हामि बनाउन्दैनौ भन्ने । हाम्रो सबै डुबानको समस्या हाल भएपछी मात्रै कुरा सुन्छौं । तिम्रो चाहनामा पनि छलफल गर्छौं भन्ने । अहिले नै कोशी सम्झौताको म्याद छँदैछ । त्यो सकिएपछि कुरा गरौला भन्ने हो भने उनीहरु हाम्रा कुरा सुन्न बाध्य हुन्छन्।
त्यसो हुँदा त हामीले कोशी सम्झौता बारे पनी केहि बोल्नै भएन नि होइन ?
अहिले त बोल्ने ठाउं नै छैन । तर, कोशी हाई ड्यामको कुरा गर्दा भने हामि त्यो कोशी सम्झौता पनि सच्याउन सक्छौं ।
भारतको इच्छामा त्यो ड्याम बनाउंदा हामीले पनि त केहि माग गर्नु पर्ला नि ?
त्यो त अब हाम्रा खोंचहरु प्रयोग हुने हुन् । त्यसको मूल्य त तिर्नु पर्यो नि । यदि केहि नतिर्ने तर हाम्रो जैविक बिबिधता र भूभाग डुबाएर निशुल्क पानी दिने कुरा नै हुँदैन । जाउ, दिन्नौ भन्नुपर्छ ।
हामीले तटबन्धन बनाएर सीमासम्म लाने र बाढी भारतमा छोडिदिने गर्दा हुँदैन ?
तटबन्धनले बाढी रोक्दैन । त्यसले त बाढी बढाउँछ । त्यो प्रविधि नै गलत हो । तटबन्धन प्रविधि हाम्रोजस्तो हाइड्रो इकोलोजिकल ल्याण्ड भएको ठाउँमा काम लाग्दैन ।
त्यसो भए बाढी नियन्त्रणको बिधी चाहिं के हो ?
बढी शतप्रतिशत नियन्त्रण गर्न सकिंदैन । यसबाट बच्न बैकल्पिक प्रविधिहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै स्टिलका खम्बा भएका तल्ला भएका घरहरु बनाउने । आखिर बाढी आउने ४ दिन होइन बढीमा ती ४ दिन माथिल्लो तल्लामा बस्ने । अरुपनि उपायहरु छन् । तर, तटबन्धनले चाहिं बाढीबाट जोगाउन सक्दैन।
मीलाई कोशीमा ड्याम चाहिंदैनु भन्दै तराई डुबाउने कामलाई निरन्तरता दिईरहयो भने नि त भारतले केहि उपाय छ ?
छ, किन नहुनु। भारतले संधै हामीसंग सुरक्षाको कुरा गर्छ । हामीले पनि भन्नु पर्छ कि यदि हामि तिम्रो कारण उत्पन्न डुबानले असुरक्षित छौं भने हामि पनि उताका कुनै सुरक्षा सरोकारमा ध्यान दिन सक्दैनौ भन्नुपर्छ ।
के नेपालले यसो भन्ला जस्तो लाग्छ ?
त्यो त कसरी भन्ने र खोइ । सबै लम्पसारवादी छन् यहाँ । दुतावासको दोस्रो सचिवले फोन गरेर हप्काउदा हप्किने प्रधानमन्त्री भएपछि के अपेक्षा राख्ने एउटा प्रेस अफिसरको बिदाइमा गृहमन्त्री भैसकेका उपप्रधानमन्त्री भैसकेका मानिसहरु जान्छन् । त्यो पनि प्राइभेट भोजमा । अब त्यस्ताले चलाईरहेको देशमा तपाई के ठुला ठुला कुरा गर्नुहुन्छ ।
बिगतमा भएका सन्धि सम्झौतामा हामि चुकेको थुन ठाउँ चाहिं खस के हो ?
कोशी र गण्डक सम्झौताको सबैभन्दा ठुलो गल्ति भनेको नै व्यवश्थापनको पुरा जिम्मा भारतलाई दिनु हो । महाकालीमा पनि उही गल्ति छ। त्यहाँ कमिसन बनाउने भन्ने छ तर त्यो नबनिकन यहांबाट उता गएर सबै उनीहरुको नै कुरा सदर गर्दै आएका छन् । रोचक कुरा के छ भने त्यो कमिसनमा रहेकाले तलब नै उतैबाट बुझछन । अब तपाई नै भन्नुहोस कि मानो उताको खाने काम यताको गर्ने पनि हुन्छ रु उताको माम उतैको काम गर्छन नेपालको तर्फबाट गएका प्रतिनिधिले ।